Nabadoon caan ah oo maanta lagu dilay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nabadoon caan ah oo maanta lagu dilay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa maanta isgoyska Zoobe oo ku yaalo degmada Hodon ee magaalada Muqdisho ku dilay nin nabadoon ah oo si aad looga yaqaanay degmadaasi.
Allaha u naxariistee nabadoonka la dilay oo lagu magacaabi jiray C/laahi Axmed Rooble, islamarkaana loo yaqaanay C/laahi Safaari, ayaa lala dilay nabadoon kale, xilli ay ku sugnaayeen agagaarka daarta Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Kooxdii dilka geystay ayaa islamarkiiba goobta isaga baxsaday, waxaana goobta uu dilka ka dhacay soo gaaray ciidamada nabad-sugidda qaranka, waxayna goobtaasi ka sameeyeen howlgalo lagu raadinaayo kooxihii dilka geystay.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid falkaasi dilka ah loosoo qabtay, waxaana ilaa iyo haatan la ogayn sababta falka dilka ah loogu geystay labadaasi nabadoon.
Si kastaba ha ahaatee, dilka nabadoon C/laahi Safaari iyo nabadoonka kale ayaa kusoo beegmayaa xilli muddo dhowr maalmood kahor degmada Wadajir lagu dilay nin ganacsade ah oo goob farmashi ah ku lahaa degmadaasi, kaas oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Cabdulle Gacal.